Machadka SIDRA oo Cilmi Baaris ku samaynaya Dimuquraadiyada iyo Doorka Siyaasada Haweenka (Sawirro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Machadka SIDRA oo Cilmi Baaris ku samaynaya Dimuquraadiyada iyo Doorka Siyaasada Haweenka (Sawirro)
Machadka SIDRA oo Cilmi Baaris ku samaynaya Dimuquraadiyada iyo Doorka Siyaasada Haweenka (Sawirro)
Posted: Mohamed Dacar - September 19, 2015 Leave a Comment
Machadka horumarinta iyo falanqaynta cilmi baarista SIDRA oo dhawaan la sameeyey daahfurkiisa Rasmiga ayaa maanta soo bandhigay Cilmi Baaris uu ku samaynauo Dimuquraadiyada Puntland iyo Doorka ay ku leeyihiin Haweenka Siyaasada Soomaaliya.
Soo bandhigida Cilmi baaristan ayaa lagu qabtay xarunta weyne ee Machadka uu ku leeyahay magaalada Garoowe waxaa ka qayb galay Wasiiro, Xildhibaano, Maamulka Gobolka, Kan Degmada, Siyaasiyiin iyo Marti kale.
Marwo Sahra Axmed Kooshin oo ah Agaasime ku xigeenka Machadka SIDRA ayaa marka hore warbixin kooban ka bixisay Machadka iyo Aas aaskiisa waxay ka hadashay qodobada uu u dhisan yahay Machadkan Daraasaadka.
Sahra waxay ka hadashay Cilmi Baarista ay samaynayaan oo ay sheegtay in ay ka kooban tahay labo qaybood oo iskugu jira qayb ka hadlaysa Faa’iidada nidaamka Dimuquraadiyada iyo muhiimada ay u leedahay Puntland iyo Qaybta kale oo ah Doorka Haweenka ay ku leeyihiin Siyaasada Soomaaliya, Waxay xustay in Dhamaan Gobolada Puntland iyo Soomaaliya ay ka soo samayn doonaan Cilmi baaristan.
Cabdilaahi Ciise Axmed oo siiyaha xilka Gudoomiyaha Gobolka Nugaal ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqada cusub uu machadka SIDRA ka bilaabay Puntland, waxa kale uu tilmaamay inay muhiim tahay in dadka laga xog waraysto waxay tabayaan sida dimuqraadiyadda iyo dadaalka haweenku ugu jiraan ka qayb galka siyaasadda Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdicasiis Siciid Gacmey ayaa sheegay inay ka Baarlamaan ahaan soo dhawaynayaan labadaan cilmi baaris oo ay SIDRA Samaynayso, waxa kale uu soo jeediyay in wax kasta oo baaritaan lagu samaynayo lagu saleeyo shareecada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida.
Xubno u hadlayay bulshada Rayidka ayaa dhankooda sheegay inay jiraan xarumo cilmi baaris ka sameeyay dimoqraadiyada iyo dowrka haweenka ee siyasada balse loo baahan yahay cilmi baaristaan cusub inay soo saarto wax ka duwan kuwii horay loo sameeyay.
Wasiirkii hore wasaradda Haweenka Marwo Caasho Geelle Diiriye oo ka mid ah Marti sharafta lagu casuumay ayaa goobta ka cadaysay in kulankan daahfurka ah uga timi magaalada Gaalkacyo, taasna ay cadayn u tahay muhiimada ay lee dahay in cilmi baaris dhab ah lagu sameeyo dimuqraadiyada iyo aragtida shacabka iyo tan haweenka.
Ugu danbeyntii Sahro Kooshin oo markii xaflada dhamaatay saxaafada la hadashay ayaa faah faahin buuxda ka bixiysay labadaan cilmi baaris oo ay sheegtay isla sanadkan 2015 soo afjarayaan, ayna muhiimad u lee dahay in xog badan iyo kayd laga sameeyo dimuqraadiyada Puntland u baahan tahay iyo doorka haweenka ee siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland, waxay hadalkeeda raacisay inaysan jirin cid ka caawinayso balse machadku uu gartay inay muhiim tahay in la sameeyo.
Machadkan SIDRA ayaa waxaa aas aasay Aqoon yahano reer Puntland oo uu hormuud u yahay Wasiirkii hore ee wasaaradda Deegaanka dalxiiska iyo Duurjoogta Puntland Guuleed Saalax Barre mar uu ka hadlayey xafladii furitaanka Machadka ayuu sheegay in dalka u baahan yahay Macaahid madax banaan oo cilmi baaris ku sameeya dhinackasta dadkana u soo bandhiga xaqiiqda iyo Wax ay u baahan yihiin.